Vehivavy kyuloty ny lamaody - izay mandeha amin'ny akanjo hikirakira ny akanjo, denim, ny fahavaratra, manga, mainty, mena, fohy, ovaina, shorts, miaraka amin'ny ratra, ho feno
Pants kyuloty - amin'ny akanjo sy ny fomba hamoronana sary hoso-doko?
Ny kapo kyuloty dia iray amin'ireo akanjo maotina indrindra amin'ny vehivavy, izay malaza indrindra amin'ny firaisana ara-drariny amin'ny vanim-potoana vao haingana. Izany dia noho ny fomba amam-panao, izay ahafahanao manao tsipika mahatalanjona.
Iza ireo pataloha masiaka?
Ny zazavavy izay nanapa-kevitra ny hanao akanjo maoderina, dia manontany tena hoe: Fa inona no endriky ny patalohan'ireo culottes? Ny vokatra azo antsoina hoe manerana izao tontolo izao, satria afaka manantitrantitra ny fahamendrehan'ny solontenan'ny firaisana ara-drariny. Na izany aza, rehefa mifidy an'io poketra io, dia mendrika ny mandinika ny endrik'ity ity na ity modely ity sy ny tarehinao. Ilaina ny mandinika ireo hevitra manaraka ireto:
Ireo tovovavy kely dia tsara kokoa raha misafidy ny modely maimaim-poana, ary ny tompon'ireo endrika matanjaka dia tokony hijanona amin'ny zavatra izay manana tongotra maro kokoa sy mora.
Ny halavan'ny pataloha dia mety miova, miovaova amin'ny faran'ny lohalika ka hatrany afovoan-tongotra. Ny safidy farany dia mety ho an'ny vehivavy feno , maimai-poana afaka manome lanja ny ankizivavy.
Pantaloons ho an'ny vehivavy matavy
Ny tompon'ny endrika mahafinaritra ihany koa dia afaka manome lamaody vaovao. Ny zava-drehetra dia nijery ny endrika araka ny endriny araka izay azo atao, ilaina ny mandinika ireto nuages ​​manaraka ireto rehefa misafidy izany:
Ny tady misy tandroka manify dia aleony, izay hanampy amin'ny fanitsiana ity faritra ity;
Ny lavany dia tsara kokoa amin'ny fisafidianana ny fidina eo ambany lohalika, izany dia hanampy amin'ny fijery maivana kokoa;
Ny tsy filaminana dia maneho modely amin'ny zana-tsipìka, dia tonga lafatra ho an'ny vehivavy feno;
Ny kyulots amin'ny fahavaratra dia mety malalaka, toy ny masoandro amin'ny ranon-tsambo, ny famokarana toy izany dia hanampy amin'ny fanafenana ny faritra misy olana;
Ny vahaolana tsara dia ho modely amin'ny fofona, ity tsipika ity dia manampy amin'ny fahamoram-pahavoazana;
Ho toy ny tendron'andriana izany dia asaina misafidy malalaka panty, tops na blouses, ny lavany amin'ny farany amin'ny tendany. Izany dia hanampy amin'ny fandanjana ny silhouette ary hijery tsara.
Ao amin'ireo fanangonana ireo malaza maro malaza no misolo ny pataloha ny fomba fanao amin'ny culottes. Anisan'izany ny toetra mampiavaka azy:
Ny halavan'ny pataloha dia mety hiankina amin'ny tery mankany amin'ny lehibe indrindra, toy ny akanjo masoandro;
Ny lavany amin'ny pataloha ny culottes dia afaka mifarana amin'ny lanjan'ny lohalika, mampahatsiahy ny shorts, na miditra amin'ny tendron'ny kofehy, amin'ity tranga ity dia toa tahaka ny fehiloha efa voafafa;
Raha ny lokon'ny loko, dia tena samihafa izy io, dia mainty mainty, fotsy, mavokely, beige, ary karazana pastel rehetra, ary loko marevaka marevaka, ohatra, jiro, akquamarine, lavender, mena mena;
Mety misy karazam-borona amin'ny endriny, ohatra, ny tsipiriany toy ny fofona.
Iray amin'ireo karazana malaza indrindra ampiasaina hamoronana sary andavanandro ny jeans of culottes. Mifanaraka amin'izany fomba izany izy ireo:
Ny manga sy manga nentim-paharazana nentin-drazana na natao tamin'ny satroka marevaka, dia azo atao ny mena, mavo, panty maitso;
ny halavany dia mety tsy mitovy amin'ny faran'ny lohalika ka hatrany afovoan-tongotra;
dia mety misy sora-baventy any amin'ny toerana samihafa, singa mamatotra, miaraka amin'ny marika any ambany.
Ny endrika kyulots ho an'ny vehivavy dia tena tsara tarehy sy mahazatra, natao tamin'ny endriny rehetra. Samihafa izany fa ny singa voalohany sy ny voalohany dia mifamatotra amin'ny singa iray, noho izany dia ny zavatra no maka ny endriky ny poketra tsy miankina. Azonao atao ny manamarika ny fiovaovan'ny sary:
Ny tapany ambony, natao tamin'ny endriky ny papango iray, izay misy fefy;
Volo mihidy, misy tanana matevina na lava;
Ny top dia azo atao amin'ny endriky ny kimono, amin'ity tranga ity, ny zavatra dia fenoina fehikibo;
Tena mahaliana tokoa ny mijery kyuloty kanto miaraka amin'ny fofona;
Ny ankabeazina dia azo atao tsy misy fanampiana na manipy jirama na pataloha ambony.
Hazo misy biriky maivana
Iray amin'ireo loha lamaody farany indrindra ny pataloha misy culottes, misy ny jiro. Ity singa ara-tsakafo ity dia manome ny orijin-tsakafo, mba hahafahanao manamboatra tsipìka tsy mahazatra. Anisan'ireo toetra mampiavaka azy ireo ireto:
Ny lamosina dia mety amin'ny loko samihafa: fotsy, mainty, mena, maitso ary hafa;
Ny lamaody lamaody farany dia mamela ny fampiendrehana modely toy ny amin'ny fanatanjahan-tena sy ny kiraro, ary amin'ny safidy kanto.
Tena mahaliana tokoa ny pataloha ny endriky ny culottes, vita amin'ny endrika shorts. Ny endri-javatra miavaka aminy dia ny halavina fohy , mifarana amin'ny lanjan'ny lohalika. Azonao atao ny manavaka ireo karazan-javatra toy izany amin'ny famolavolana ny vokatra:
Modely vita amin'ny tapa-doko, izay azo atao amin'ny fararano sy ririnina;
mety misy zana-tsipìka, izay mahatonga azy ireo ho tena mahazendana, ny zavatra toy izany dia azo atao ao amin'ny birao aza;
kyuloty ny patalohotra lava, vita amin'ny lanezy manidina, dia ho lasa zava-dehibe amin'ny vanin-taona amin'ny fahavaratra.
Amin'ny inona no tokony hampiasana kyuloty?
Vehivavy lamaody maro izay manana zava-baovao tsara dia manontany tena: inona no tokony hatao amin'ny culottes? Ny vokatra dia mora azo ampifandraisina amin'ny karazan-javatra samihafa, izay ahafahanao mitanisa ireto manaraka ireto:
Free pants, T-shirts, tops, izay afaka manana lavaka mifarana amin'ny faritry ny waist. Ny safidy iray hafa dia ny manosika azy ireo eo amin'ny pantsanao;
Fikirakira kiraro na totozy, izay hanampy amin'ny fanamafisana ny fahamendrehan'ilay sary;
kibon'ny ankapobeny, ankoatra izay afaka manipy lobaka na pataloha;
ny tampony dia afaka mitafy akanjo, manana fehin-tanana fohy, avy amin'ny halavany mahazatra na telo.
Mba hamaritana ny karazana kiraro mitafy kyulots, dia misy karazany maro ny modely azo ampiasaina. Miankina amin'ny vanim-potoana, mety ho boots, kiraro, kiraro, kiraro kiraro, kiraro mihidy na mivoha, baolina lavalava, kapa, lofers, moccasins, kiraro na kiraro. Ireo kiraro dia mety amin'ny tokotanin'ny tranokala na trakiera , kofehy, sehatra, lavaka lava be dia be amin'ny hatevim-pamokarana.
Amin'ny akanjo hikirakira kyuloty amin'ny fahavaratra?
Amin'ny fanombohan'ny toetr'andro mafana dia manjary maika ny fanontaniana: inona no tokony hatao amin'ny kulotas amin'ny fahavaratra? Afaka mifangaro miaraka amin'ireto akanjo gasy manaraka ireto izy ireo:
ampongabendanitra amin'ny tady;
harona kofehy malefaka;
T-shirt maimaim-poana na tery;
Sandapo amin'ny kiraro, kofehy, sehatra, ballet.
Amin'ny inona no tokony hitafy kyuloty amin'ny ririnina?
Ny pataloha misy saribakoly ho an'ny vehivavy dia mety tsara amin'ny famoronana ny fahavaratra, fa koa ny tsipìka amin'ny ririnina. Hijery tsara izy ireo amin'ireto zavatra manaraka ireto:
free sweatshirts ho avy, nofenoina ary nanaovana akanjo lehibe;
Miakanjo amboamboarina, jumper na turtleene hafanana;
miaraka amin'ny akanjo mafana;
Ao amin'ny hatsaran'ny amboaram-bolo, jirobe, akanjo hoditra, akanjo marevaka misy lavalava izay mifarana amin'ny faritry ny waist na mofomamy miloko marevaka , izay mety ho lava ny lohalika, dia tonga lafatra;
satria ny kiraro dia misy kiraro, kiraro na kiraro fohy miaraka amin'ny bootleg.
Amin'ny inona no tokony hitafy ireo culottes amin'ny lohataona?
Amin'ny fanombohan'ny toetr'andro mafana, afaka mamorona sary tena tsara tarehy sy mahavariana ianao. Azonao atao ny manonona ny karazan-javatra toy izany:
miaraka amin'ny modely lantomina maivana;
miaraka amin'ny hoditra fohy na akanjo jaky;
miaraka amin'ny fonosana napetraka teo ambonin'izy ireo, kardigana, akanjo;
miaraka amin'ny loko, panty, kiraro, blozy;
Fa ny safidin'ny kiraro, ny pataloha ny kulottes amin'ny kiraro, kiraro, kiraro, kiraro baolina karazana dia tsara.
Sary misy pantaloons
Amin'ny fampiasana singa toy ny akanjo toy ny kulottes ny pataloha, azonao atao ny mamorona karazana sary marobe, ny zavatra rehetra dia miankina amin'ny endrik'ireo zavatra nofidina ho azy ireo. Azonao atao ny manonona ny karazan-tsipika mahazatra toy izany:
Ao amin'ny style of kezhual, dia azo atao amin'ny fanampiana karazan'akanjo rehetra, sweatshirts, shirts, T-shirts. Ny akanjo dia mety amin'ny kiraro amin'ny dia lavitra na amin'ny solecteur tractors, sneakers ary sneakers.
Ny tsipìka ara-barotra, izay vokarin'ny vokatra vita amin'ny tendrony ambany, dia mainty mainty, fotsy, beige, fotsy ary manga. Miaraka amin'izy ireo dia hijery ireo akanjo marevaka, karavasy, akanjo sy akanjo.
Sary mampihetsi-po izay azo ampitaina amin'ny lamosina matevina matevina vita amin'ny chiffon na dantelina.
Ny tsipìka mahatalanjona ny hariva dia azo atao raha mampiasa kiraro ambony na kiraro ambony sy kiraro mahavariana amin'ny fianarana ambony ianao.
Ny sary biker dia natao tamin'ny fanampian'ny jirama hoditra - "fanipika".
Fitaovana miaraka amin'ny celos
Azonao atao ny manamboatra sary an-tsary mahavariana amin'ny alàlan'ny fampiasana manga manga, fotsy, beige, manga, mainty mainty ho an'ny culottes. Miasa ho toy ny ampahany amin'ny akanjo maingoka iray izy ireo, izay ahitana ny toetra toy izany miavaka:
Ny jaky na ny palitao dia mety mifanaraka amin'ny lokon'ny pantalona na manohitra azy ireo. Mandritra ny fotoana lava an'ity zavatra akanjo ity, izay mifarana amin'ny tady.
Ho an'ity costume ity dia afaka misafidy karazana kiraro kanto samihafa, ireo dia mety ho kiraro, kiraro, mpangalatra, kapa. Amin'io tranga io, ny kiraro dia mety henjana, kofehy, lava be na tery.
Pants kyulots amin'ny kiraro
Vehivavy maro loko no manontany: amin'ny inona ny akanjo tokony hosoloana kjuloty? Tsy afaka mifangarika afa-tsy amin'ny safidy manintona izy ireo, fa koa miaraka amin'ireo novonoina tamin'ny endrika fanatanjahan-tena , ireo mpitaingin-tsoavaly na mpitaingin-tsoavaly. Ity kombina ity dia hanampy amin'ny famokarana tsipìka tsy misy lala amin'ny fomba kazhual. Keds dia azo aseho amin'ny alalan'ireo fiovana manaraka:
ambony na ambany;
manambatra amin'ny laces, mifanaraka amin'ny loko na ny mifanohitra;
aoka ho eo am-pamoloana na tena matevina;
Ho toy ny ampahany ambony amin'ny sary ankapobeny, ny panty, ny T-shirts na ny lobaka, ny lobaka na ny lobaka jirobe dia hijery tsara.
Leather jacket miaraka amin'ny kapa - 62 sarin'ny modely modely ho an'ny tsiro rehetra
Sambo mena - fifantenana saripika lamaody amin'ny boatin-koditra mainty
Mitarika eo amin'ny sehatra
Mofomamy misy embroidery
Anklefy ho an'ny vehivavy bevohoka
Skirt-pencil - modely klasika sy hevitra vaovao ho an'ny sary tsara
Dresses sy sarafana
Ny kiraron'i Manolo Blahnik
Myositis - fitsaboana
Ahoana ny hanamboarana bitro?
Kavina tsy mahazatra
Lahatsary mampihomehy: Katy Perry sy Orlando Bloom dia nahazo mofomamy iray
Hatena amin'ny sofina
Maritime amin'ny tapa-bolana - recipe
Ny fiarovana ny zanakao dia toro-hevitra ho an'ny ray aman-dreny
Mipoitra alohan'ny fampiofanana
Fonja vita amin'ny simenitra
Fanadiovana aorian'ny fiterahana
Chocolat fondant - fomba fitsaboana frantsay tsy misy dikany
Ahoana no hampitony ny hatezeranao?
Ahoana ny fomba hanaovana saka amin'ny kisoa?
Manicure ny lohataona
Mikrolita eo amin'ny voa - inona io?
Ny blaogin'i Megan Fox dia nisaintsaina momba ny fahanteran'ny hôndè Helen Degeneres
Ny fomba fitadiavam-bidy amin'ny hena any an-trano
Rano mangatsiatsiaka ao an-trano
Inona no tokony ataoko raha manongilan-tsofina aho?
Ny vokatra manatsara siramamy